Hot-Sales Gases Factory, Suppliers - China Hot-Sales Gases Abakhiqizi
I-Sulphur Tetrafluoride (SF4)
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, i-ethylene igesi engenambala, evuthayo futhi enobuningi obungu-1.178g / L, obuncane kakhulu kunomoya. Cishe ayincibiliki emanzini, ayincibiliki neze ku-ethanol, futhi incibilika kancane ku-ethanol, ketoni, naku-benzene. , I-Soluble ku-ether, incibilika kalula kuma-solvents we-organic njenge-carbon tetrachloride.
Amapharamitha wezobuchwepheshe: Ukucaciswa 99.9% 99.999% Carbon Dioxide ≤ 400 ppm ≤ 2 ppm Carbon Monoxide ≤ 60 ppm ≤ 1 ppm Nitrogen ≤ 450 ppm ≤ 2 ppm Oxygen + Argon ≤ 30 ppm ≤1 ppm THC (as Methane) ≤ 5 ppm ≤ 0.1 ppm ppm Amanzi ≤ 5 ppm ≤1 ppm I-Hydrogen chloride inefomula yamakhemikhali iHCl. I-molecule ye-hydrogen chloride yakhiwe nge-athomu ye-chlorine ne-athomu ye-hydrogen. Uyigesi ongenambala onephunga elibi. Igesi elonakalisayo, elingashisi, alisebenzi ngamanzi kepha liyancibilika kalula ...